Khalaafada Islaamiga ah (ISIS) oo aqbashay xubinimada Boko Haram – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
13th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Daacish ayaa aqbashay yabooh is gaashaanbuursi ah oo kaga yimid kooxda Boko Xaraam ee dalka Nigeria, taasoo hogaamiyaheeda Abubakar Shekau oo todobaadkii hore cod uu soo diray ku sheegay inuu beyco la galay Abubakar Al-baqdadi oo ah hogaamiyaha dowladda Islaamiga ah (Daacish).
Daacish (ISIS) ayaa soo saaray codka Afhayeenkooda Abuu Maxamed Al-Cadnaani oo sheegaya in uu u hadlayo hoggaamiyaha kooxdaasi Abuu Bakar Al-Baqdadi oo sheegay in uu soo dhaweynayo adeecidda walaalahooda Boko Haram.
Alcadnani ayaa sheegay in Khalaafada Islaamku gaartay galbeedka Afrika, wuxuuna dadka ugu baaqay iney u haajiraan dhulka Islaamka.
Boko Haram waxay sabtigii la soo dhaafay boggeeda twitter-ka ku sheegtay in ay adeeceyso ururka khilaafada islaamka ee loo yeqaanno Daacish.
Alshabaab oo weerar ku qaaday gudoomiyaha degmada Mandera